Lionel Messi Oo Ugu Danbeyn Shabaqa Ka Soo Taabtay Goolhayaha Halyeeyga Ah Gianluigi Buffon - Laacib.net
Lionel Messi Oo Ugu Danbeyn Shabaqa Ka Soo Taabtay Goolhayaha Halyeeyga Ah Gianluigi Buffon
Xiddiga Barcelona Leo Messi ayaa sameeyay xalayto waxa uu hore u sameyn waayay dhow jeer. Xiddiga reer Argentina aya hore ugu hungoobay inuu shabaqa ka soo taabto goolhayaha Juventus iyo xulka qaranka Talyaaniga Gianluigi Biffon.
Waxaana ay aheyd wax mar walba maankiisa ku taagnaa, laakiin ugu danbeyn markii afaraad uu ka horyimid ayaa shabaqa ka soo taabtay isagoo xalayto labo gool kaga dhaliyay garoonka Cam Nou.
Messi ayaa Buffon hore u soo wajahay seddex jeer. Waana uu awoodi waayay inuu gool ka dhaliyo haddii ay aheyd finalkii Champions League ee 2015 iyo labadii kulan ee wareega sideed dhamaadka ee xilli ciyaareedkii hore.
Si kastaba, xalayto oo Talaado aheyd ayuu awood u yeeshay inuu garaaco Buffon, waxaana uu u baahnaa kaliya 45 daqiiqo si uu taasi u sameeyo. Goolkii uu ku jabiyay Buffon waxa uu ahaa mid ay u taabtay Luis Suarez iyadoo dhismaha goolkaas uu ka soo bilowday goolhaye Marc-Andre ter Stegen.
Goolkii ugu horeysay ee uu Messi ka dhaliyo Buffon waxa ay timid ka mid ah 315 daqiiqo oo uu wajahay goolhayaha halyeeyga ah.
Waxaana uu ahaa goolka uu Messi la dabaaldegay asxaabtiisa halka Buffon uu qarin waayay caradiisa. Waxa ay aheyd goolkii 95aad ee uu Champions League ka dhaliyo Messi, waxaana uu qeybtii labaad sii raacday goolkiisii 96aad.
Messi ayaa haatan dhaliyay sideed gool xilli ciyaareedkan iyadoo todobo ka mid ah ay ka yimaadeen seddexdii kulan ee ugu danbeysay.